Yaaa gadaal ka riixaya heshiis kordhinta Raheem Sterling | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Yaaa gadaal ka riixaya heshiis kordhinta Raheem Sterling
(13-1-2018) Kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay Raheem Sterling ka dhigto mid ka mid ah ciyaartoydeeda ugu mushaarka badan dunida si ay isugu dayaan in qandaraas cusub uu u saxiixo kooxda Sky Blue.
Manchester City ayaa la filayaa inay wadahadalo horudhac ah la bilawdo xiddiga heerka caalami ee dalka England bilowga bisha soo aadan, waxaana ay rajeynayaan inay gaaraan heshiis degdeg ah.
Sterling ayaa noqday ciyaaryahankii ugu muhiimsanaa City xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 18 gool tartamada oo dhan – waana goolashii ugu badnaa ee uuhal xilli ciyaareed dhaliyo isagoo kaa caawinaya kooxdiisa in ay dhibco fara badan ku hayaan hogaanka horyaalka England.
Sida laga soo xigtay The Guardian, Sterling ayaa ku dhow in lagu abaalmariyo heshiis cusub oo qandaraas dheer leh, waxaana intaa la raaciyay in ugu yaraan 50 kun oo ginni uu loogu dari doono mushaaraadka isbuuc walba uu ka qaato Manchester Cityisbuuciiba.
Sterling oo hada aad muhiim ugu ah kooxda Manchester City ayaa kooxdiisa kula jira qandaraas dheere oo dhici doona sanadka 2020ka laakiin Manchester City ayaa dooneysa in ay mudo dheer ka saxiixaan Sterling oo suuqa kala iibsiga aad looga hadalhayo.